Amino Acids Uye Zvinobva Kwavo, Boric Acid Uye Borate - Balmxy
Amino acids uye zvigadzirwa zvavo
Boric acid uye borate akateedzana
Morpholine uye zvigadzirwa zvayo
Humwe hunhu hwepakati
Kukudzwa uye kugona
R & D uye Innovation
Zvikamu Shanghai Balmxy Pharmaceutic Co., Ltd. yakavambwa muna Kukadzi 2010. Muna Chikunguru 2019, kambani yakapihwa zita seyenyika yepamusoro-tech bhizinesi.
Xinyuan Pharmaceutical iri kusimukira tekinoroji bhizinesi rinoshanda muR & D, kugadzirwa uye kutengesa kwemakemikari akanaka nemaAPIs. Iyo kambani yakafambira mberi R & D nzvimbo uye yepamusoro yekutarisa nzvimbo, yakaenzana mutyairi chirimwa uye yekugadzira base. Iyo kambani zvakare ine akati wandei akazvimiririra akavandudzwa zvigadzirwa, uye inogona kuvandudza uye kugadzirisa akasiyana marudzi emaAPIs uye zvemishonga epakati maererano nezvinodiwa nevatengi.
Kuomerera pane yemhando yepamusoro zera mutsara manejimendi uye vatengi rubatsiro rwehunyanzvi.
Boric acid uye borate ...
Heterocyclic komputa ...
Morpholine neayo ...
Humwe Unhu ...
Kubvira payakagadzwa, fekitori yedu yanga ichigadzira zvigadzirwa zvekutanga zvepasirese nekutevedzera mutemo wehunhu kutanga. Zvigadzirwa zvedu zvakawana mukurumbira wakanaka muindasitiri uye inokoshakuvimbika pakati pevatengi vatsva nevakuru ..
Ziviso yeruzhinji yezvikwata zvekuratidzira zvekuyedza zveShanghai patent basa rinofanira kuzivikanwa muna 2020
Zvinoenderana nezvinodiwa ne "Shanghai Municipal Enterprise uye Institution Patent Work Pilot Kuratidzira Chikamu Kuziva uye Matanho Matanho" (Shanghai Zhiju ﹝ 2017 ﹞ 62), kuburikidza nekuongorora kwenyanzvi uye mamwe maitiro, uye zvakakurukurwa neMasipala Intellectual Property ...
Chinyorwa chemapurojekiti akasarudzika eShanghai's 2020 "Science uye Technology Innovation Action Plan" Technology Innovation Fund (Yechipiri Batch)
Chinyorwa chemapurojekiti anomisikidzwa muShanghai 2020 "sainzi uye hunyanzvi hunyanzvi hwekuita chirongwa" tekinoroji yekuvandudza hutsva (yechipiri batch) Dzvanya kuti uone rondedzero
Chiziviso pane runyorwa rweakarongerwa mibairo yeepamusoro-tech mabhizinesi mudunhu reSongjiang mu2019
Zvinoenderana nemweya wegwaro "Rwiyo rweSongjiang rwekukurumidza Kufambisa kwePamusoro-tech Enterprises muG60 Science uye Technology Corridor" (Husong Fugui  No. 23), zvinokurudzirwa kupa 2019 Songjiang District High-tech Enterprise. Mubayiro uye Rutsigiro ku52 ...
Xinyuan Pharmaceutical iri kusimukira tekinoroji bhizinesi rinoshanda muR & D, kugadzirwa uye kutengesa kwemakemikari akanaka nemaAPIs.
Zvikamu Shanghai Balmxy Pharmaceutic Co., Ltd.